Automatic Mask Machine (imwe yeaviri) Vagadziri uye Vanotengesa - China Fekitori - Quanzhou waimaoniu Import uye Export Trade Co, Ltd.
Musha > Zvigadzirwa > Mask Machine > Otomatiki Masiki Machine (imwe yeaviri)
Makiniki masiki muchina (rimwe chete kune maviri)
Yakazara otomatiki kugadzirwa gadzira, maviri anoburitsa mitsara, yakakura kubuda
Makiniki masiki muchina (rimwe chete kune maviri) product introduction
Chinyore otomatiki masiki muchina (imwe chete mbiri), kushandisa servo uye inopisa tembiricha control system kudzora izvo zvinhu kubva mukupinda â † 'kugadzira â †' kukwenya Iyo yekugadzira iyo yose maitiro Zvigadzirwa zvemask yemachini Maskini muchina ndeyekugadzira masks akasiyana siyana anogara achifita kuita kuburikidza nemaitiro akadai sekupisa-akatsimbirirwa kupeta kukuumba, ultrasonic welding, kubvarura shamhu, uye kutetepa kweye earband mhino bhiri mitsetse. Chiyero chayo chekugadzira masiki ndeye 110 zvidimbu / min uye pamusoro, uye chiyero chekupasa chiri kupfuura 98%, iyo inogona kudarika zvakapetwa kaviri kugona kwekugadzirwa kwezvakagadzirwa zvakafanana.
Zvizere otomatiki mask mashini (imwe yeaviri) -Product mukana
1. Iyo servo uye yenguva dzose tembiricha yekudzivirira system inotambirwa inodzorwa nePC chirongwa chekugadzira izvo zvinhu kubva mukupinda â † 'kugadzira â †
2. Intelligent control platform, zviri nyore kudzidza uye kushanda, munhu mumwe chete anogona kushanda;
3, yakakwirira kugadzirwa kugadzikana, maviri anoburitsa mitsara panguva imwe chete kuwedzera zvakanyanya kugadzirwa;
4. Iyo yekumhanya yekugadzira masks ndeye 110 zvidimbu / min uye pamusoro, uye chiyero chakakodzera chiri pamusoro 98%.
Yakazara otomatiki masiki muchina (imwe for maviri) -Product paramita
Kushanda: 110 pcs / min
Mushini saizi 7000 * 2700 * 2000mm
Hot Tags: Automatic Mask Machine (imwe yeaviri), Vagadziri, Vagadziri, Wholesale, Fekitori, Tenga, China, Yakagadzirwa muChina, Mutengo, Mutengo weChinyorwa, Quotation, CE, FDA
otomatiki disposable yemeso mask maskOtomatiki kumeso Mask Machineotomatiki chinhu chinorasairwa mushininzira yekurasa mvura